သိန်းထောင်ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့Andaman Gold နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဖော်ကာ – Cele Top Stars
March 11, 2021 By admin2News
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့Andaman Gold နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ မြန်မာငွေ သိန်း 1600 စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ‘ ဖေါ်ကာ ‘အဆိုတော် ‘ ဖေါ်ကာ အနုပညာသမားထဲမှာ စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ Andaman Gold နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ ပွဲလေးဆယ်စာ မြန်မာငွေ သိန်း 1600 ကို အနစ်နာခ ပြီး စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့Htain Minn Zaw အဆိုတော်’ဖေါ်ကာ’
Fokker, Wanted Band . လေးစားပါတယ်။ ​လေးစားပါတယ် ဆက်လက်​အောင်မြင်ပါ​စေ ညီ​လေး ၂ လကျော်ခန့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး Brand Kol sa GS Andaman Gold နှင့်ဒီ အပတ်ထဲ တစ်နှစ်စာ စာချုပ်ချုပ်မည့်ကိစ္စအား ကျွန်တော့်ဖက်က ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါကြောင်း၊
ကူညီပေးခဲ့ကြသော “သာမန်ပြည်သူဝန်ထမ်း” ညီအကိုများကိုတော့ ကျေးဇူးတင် အားနာခွင့်လွတ်စေချင်ပါကြောင်း၊ထိုအပြင် ကျွန်တော်သည် ဂီတနဲ့အသက်ရှင်သောဂီတသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Civil Disobedience ပြုလုပ်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ပည်သူ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်များနှင့် အခြားသော ဌာနဆိုင်ရပည်သူ့ဝန်ထမ်းများနှင့် အတူတကွ ရပ်တည်သွားပါမည်။
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ စဈတပျနဲ့ဆကျနှယျနတေဲ့Andaman Gold နဲ့ စာခြုပျခြုပျထားတဲ့ မွနျမာငှေ သိနျး 1600 စာခြုပျကို ဖကျြသိမျးလိုကျတဲ့ အဆိုတျော ‘ ဖျေါကာ ‘အဆိုတျော ‘ ဖျေါကာ အနုပညာသမားထဲမှာ စဈတပျနဲ့ ဆကျနှယျနတေဲ့ Andaman Gold နဲ့ စာခြုပျခြုပျထားတဲ့ ပှဲလေးဆယျစာ မွနျမာငှေ သိနျး 1600 ကို အနဈနာခ ပွီး စာခြုပျကို ဖကျြသိမျးလိုကျတဲ့Htain Minn Zaw အဆိုတျော’ဖျေါကာ’
Fokker, Wanted Band . လေးစားပါတယျ။ ​လေးစားပါတယျ ဆကျလကျ​အောငျမွငျပါ​စေ ညီ​လေး ၂ လကြျောခနျ့ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးခဲ့ပွီး Brand Kol sa GS Andaman Gold နှငျ့ဒီ အပတျထဲ တဈနှဈစာ စာခြုပျခြုပျမညျ့ကိစ်စအား ကြှနျတေျာ့ဖကျက ဖကျြသိမျးလိုကျပါကွောငျး၊
ကူညီပေးခဲ့ကွသော “သာမနျပွညျသူဝနျထမျး” ညီအကိုမြားကိုတော့ ကြေးဇူးတငျ အားနာခှငျ့လှတျစခေငျြပါကွောငျး၊ထိုအပွငျ ကြှနျတျောသညျ ဂီတနဲ့အသကျရှငျသောဂီတသမားတဈဦးဖွဈပါသညျ။ Civil Disobedience ပွုလုပျ၍ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒထုတျဖျောကွသော ပွညျသူ့ဝနျထမျးအငျဂငျြနီယာမြား၊ ပညျသူ့ဝနျထမျး ဆရာဝနျမြားနှငျ့ အခွားသော ဌာနဆိုငျရပညျသူ့ဝနျထမျးမြားနှငျ့ အတူတကှ ရပျတညျသှားပါမညျ။